I-iPhone 13 ingaba namandla amakhulu we-512GB | Izindaba ze-IPhone
I-iPhone 13 ingaba namandla amakhulu we-512GB
Ngokusho kweTrendForce, amamodeli amasha we-iPhone 13 azokwethulwa yi-Apple ngoSepthemba ozayo izofinyelela ku-512 GB wesitoreji sangaphakathi. Le nkampani yocwaningo yaseTaiwan ixwayisa ukuthi inkampani yaseCupertino ihlela ukwethula izinhlobo ezintsha ze-iPhone ngoSepthemba ozayo, ingeza i-iPhone mini, i-iPhone namamodeli amabili we-iPhone Pro njengoba i-iPhone 12 inanamuhla.
Kepha ngaphandle kokuhlala kulokho, okuchazwa yiTrendForce nokuthi eminye imithombo yezindaba yabelane ngayo njenge Ama-MacRumors, ukuthi lezi zinhlobo ezintsha ze-iPhone zizofaka i-notch encane, zizofaka nefayela le- Amaprosesa alandelayo we-A15 enziwe ngenqubo ye-5-nanometer nokuthi amamodeli wepro azofaka ngokusemthethweni izinga lokuqabula le-120Hz lokuboniswa kwawo futhi.
Kunamahemuhemu amaningana asikisela ukuthi imodeli elandelayo ye-iPhone izoletha izinguquko ezimbalwa ngokuqhathaniswa nemodeli yamanje, kepha ezinye ezigqame kuwo wonke amadivayisi eselula akhishwe kuze kube yimanje yinkampani yaseCupertino.
Isithwebuli se-LiDAR kubonakala sengathi sizophinde sihlale sodwa kumamodeli we-Pro kulesi sizukulwane esilandelayo futhi futhi akunakwenzeka ukuthi bandise umthamo omkhulu i-iPhone 12 esivele inayo, i-512 GB. Kumamodeli we-Pro amasha avela kule ndlela babuye bathi i-Ultra Wide lens izokwengeza ukugxila okuzenzakalelayo futhi kucatshangwe ukuthi kungaphezu kwezinto ezintsha ezengezwayo kulindeleke ukuthi ukukhiqizwa kwama-iPhones minyaka yonke kowezi-2021 kukhula cishe ngo-12,3% unyaka nonyaka kufinyelela kumayunithi angama-223 wezigidi akhiqizwayo. Isibalo esiphakeme impela sicabangela umongo wobhadane esihlangabezana nawo njengamanje.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » Ama-terminals we-IPhone » iPhone 13 » I-iPhone 13 ingaba namandla amakhulu we-512GB
I-iPhone 13 ingasabisa ukuthengisa ngenxa yegama layo
Ungazifinyelela kanjani izitika ze-WhatsApp